အွန်လိုင်းဂိမ်းနှင့် အပြင်ဂိမ်းတို့၏ကွာခြားချက် - Myanmar Online Game
မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ မိတ်ဆွေအတွက် အကျိုးရှိစေမယ့် အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုတော့ ပြောပြပါရစေနော်။ ကျွန်တော်တို့ နေထိုင်တဲ့ ဒီကမ္ဘာကြီးဟာ နည်းပညာများ တိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှ လူနေမှုအဆင့်အတန်းသည်လည်း လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်ပြောင်းလဲနေပါတယ်။ ထိုနည်းတူပဲ ယခင်က လူတွေအချင်းချင်း စုပေါင်း တွေ့ဆုံကြပြီး အပျင်းပြေ ဆော့ကစားကြတဲ့ ဂိမ်းတွေဟာလည်း ယနေ့ခေတ်မှာဆိုရင်တော့ online(အင်တာနက်)ပေါ်တွင် များစွာ ဆော့ကစားလာကြတာကိုလည်း တွေ့ရပါတယ်။
ဆိုတော့ ဘာကြောင့် လူတွေဟာ Online Game မှာ ပိုမိုဆော့ကစားလာရတာပါလဲ? ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေကိုများ တမူထူးခြားရနေစေတာလဲ? စိတ်ဝင်စားစရာပဲနော်! ဘာတွေလဲ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။
ပထမအချက်အနေနဲ့ online(အင်တာနက်)ပေါ်မှာ ဂိမ်းကစားခြင်းက မိတ်ဆွေကို လွယ်ကူစွာဂိမ်းကစားနိုင်ဖို့ရန် အခွင့်အရေးပိုပေးပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ မိမိရှိနေတဲ့နေရာမှာ ဥပမာ- မိမိကိုယ်ပိုင်အိမ်၊ကိုယ်ပိုင်နေရာမှာ (သို့မဟုတ်) တခြားမည်သည့်နေရာမျိုးမှာမဆို အင်တာနက်ရှိရုံဖြင့် အလွယ်တကူ ဆော့ကစားနိုင်လို့ပါ။ မိမိစိတ်သဘောရှိတဲ့အတိုင်း မိမိတစ်ယောက်တည်း ကစားနိုင်သလို မြောက်များစွာသော ဂိမ်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ ကစားနိုင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်ကတော့ မိမိဆော့လိုတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားများကို အချိန်မရွေး free ဆော့ကစားနိုင်တဲ့ အချက်ပါ။ အကယ်၍ မိတ်ဆွေက မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနဲ့ အပြင်မှာပဲ ဆော့ကစားလိုတယ်ဆိုရင်တော့ သူတို့အားတဲ့အချိန်တွေမှာပဲ ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဖန် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ငွေကြေးမရှိဘဲ free ကစားလိုတယ်ဆိုပေမယ့် သူငယ်ချင်းများက ငွေကြေးနဲ့ကစားလိုတဲ့အခါမျိုးမှာဆိုရင် မိတ်ဆွေအတွက် ဂိမ်းကစားနိုင်ဖို့ အခွင့်အရေးက ဆုံးရှုံးရမှာတော့ပါ။
ဒါပေမယ့် သင်က online ပေါ်မှာ ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင် free ကစားလို့ရတဲ့ နေရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ဘယ်အချိန်ပဲကစားမလဲ တစ်နေကုန်ပဲကစားမလား လုံးဝ စိတ်ကြိုက် ကစားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးက အခုမှဂိမ်းစကစားမယ့် မိတ်ဆွေတွေအတွက်ဆိုရင် အထောက်အပံ့အများကြီးရတာပေါ့။ ဟုတ်တယ်မလား?
တတိယအချက်ကတော့ ဘာဖြစ်မလဲ? အပိုဆုကြေးငွေတွေ ပေးတာပါပဲ။ မိတ်ဆွေက လောင်းကစားမှာ အသင်းဝင်အသစ်ဆိုရင် မိတ်ဆွေဝင်ထားတဲ့ website ကနေ welcome bonus အပိုဆုကြေးငွေတွေ ပေးတတ်ကြပြီး အများဆုံး ဒေါ်လာ သုံးထောင်ဖိုးလောက်အထိ ပေးတတ်ကြပါတယ်။ ဒါက online ဂိမ်းဆော့ခြင်းရဲ့ ကြီးမားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြီးတစ်ခု ပဲမဟုတ်ဘူးလား? အကယ်၍ မိတ်ဆွေက အပြင်မှာပဲ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားနေမယ်ဆိုရင် ဘယ်သူဘယ်ဝါမှ အပိုဆုငွေမပေးတဲ့အပြင် ဂိမ်းရှုံးတာပဲ အဖတ်တင်မှာပါ။
နောက်တစ်ချက်ကတော့ သင့်အနေနဲ့ online ပေါ်မှာ ဂိမ်းအမျိုးအစားများစွာ ရွေးချယ်ဆော့ကစား နိုင်ခြင်းမျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်မှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားမယ်ဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ သူတို့ ကစားလိုတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားနဲ့ကိုက်ညီမှသာ အတူဆော့ကစားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါပေမယ့် မိတ်ဆွေအနေနဲ့ online ပေါ်မှာ ဂိမ်းကစားမယ်ဆိုရင်တော့ ဘယ်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းမှ အတူဆော့ဖို့ ညှိနှိုင်းနေစရာမလိုပဲ မိတ်ဆွေ ဆော့ကစားလိုတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားကို စိတ်ကြိုက် ဆော့ကစားနိုင်မှာပါ။ ခဏပဲဆော့မလား တစ်နေ့လုံးပဲ ဆော့မလား? အမုန်းဆော့မလား? မိတ်ဆွေစိတ်ကြိုက် ရွေးချယ်ဆော့ကစားလို့ရပါတယ်။တစ်ဖန် online ပေါ်မှာရှိတဲ့ ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေက လုံးဝ update ဖြစ်တဲ့ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေနော်။
သေချာတာတစ်ခုတော့ မိတ်ဆွေအပြင်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ကစားတဲ့ ဂိမ်းတွေထက်ဆိုရင် များစွာမှ ခေတ်သစ်ဆန်တဲ့ ဂိမ်းတွေ မြောက်များစွာ ကစားနိုင်မှာပါ။ ဆိုတော့ ဒီလို ကောင်းကျိုးတွေကို ဘာလို့ လက်လွတ်အရှုံးခံတော့မလဲ? ဟုတ်တယ်မလား?ဒါကြောင့် Online ပေါ်မှာ ဂိမ်းဆော့ကစားခြင်းက မိတ်ဆွေအတွက်
ဂိမ်းကစားဖို့ နေရာရှာနေစရာ မလိုတော့ဘူး
မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ဂိမ်းကစားဖို့ ညှိနှိုင်းနေစရာလဲမလိုဘူး
Free ဂိမ်းတွေကိုလည်း စိတ်ကြိုက်ကစားနိုင်တယ်
Bonus အပိုဆုကြေး ငွေတွေကလည်း လက်ဆောင်အဖြစ်ပေးနေသေးတယ်
ရွေးချယ်ဆော့ကစားစရာ ရာချီနေတဲ့ update ဂိမ်းအမျိုးအစားတွေလဲ စုံနေသေး
တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဂိမ်းကစားသမားတွေနဲ့ အချိတ်အဆက်ရှိတော့ မိမိ skills လည်း ပိုမိုတိုးတက်လာ တာပေါ့။ ဒါ့အပြင် မတူညီတဲ့လူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်သွယ်ခွင့်ရနေတယ်ဆိုတော့ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှုအကြောင်းတွေလည်း ဂိမ်းကစားရင်း တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ လေ့လာနိုင်တယ်လေ။ ဆိုတော့ ဒီထက်ကြီးတဲ့ အခွင့်အရေးက ဘယ်မှာများ ထပ်ရဦးမှာလဲ။ မိတ်ဆွေထင်တဲ့အတိုင်းပဲ online ပေါ်မှာ ဂိမ်းကစားခြင်းကပဲ ရနိုင်တယ်လေ။ ကဲ…ဒါကြောင့် မိမိဝါသနာလည်းလုပ်ရင်းနဲ့ များစွာသော အကျိုးကျေးဇူးတွေကို အခုပဲ ရယူလိုက်ပါ။